Qorshaha Faa'iidada Medicare - Caymiska Caafimaadka Deegaanka ee Gobolka Washington - CHPW
Haddii aad gareyso 65 ama aad horeyba u lahayd Medicare-ka Asalka ah, waxaad ka heli kartaa caymis CHPW oo leh dheefaha dheeraadka ah ee ugu hooseeya $ 0.
65 sano buu noqonayaa? Baadh qorshayaasheena Medicare.
Waxaa jira wax badan oo ka baxsan Medicare-ka asalka ah - sida caymiska ilkaha iyo aragga, faa'iidooyinka hodanka ah, iyo kooxda deegaanka ee kaalmaysa caafimaadkaaga oo dhan. CHPW waxay siisaa seddex qorshe oo shaqsiyaadka u qalma Medicare.
Sida Medicare, laakiin ka fiican. Qorshayaasha Faa'iidada Medicare ee CHPW waxay bixiyaan faa'iidooyin badan iyo amniga ugu badnaan jeebka.
Eeg qorshooyinka ➜
CAAFIMAAD IYO CAAFIMAAD
Dadka qaarkiis waxay uqalmayaan labadaba Medicare iyo Medicaid (Apple Health). Qorshaha laba-u-qalmaanta ee CHPW wuxuu ku siinayaa faa'iidooyinka labadaba, iyo inbadan oo intaas ka badan.
Haddii aadan rabin inaad beddesho qorshooyinka Medicare, waxaad kuheli kartaa caymiska baahiyahaaga caafimaadka habdhaqanka iyada oo loo marayo CHPW.
Miyaan xaq u leeyahay Medicare?
Si aad xaq ugu yeelatid Medicare, ugu yaraan mid ka mid ah waa inuu ku codsadaa:
✓ Waxaad tahay 65 sano ama ka weyn.
✓ Waxaad ka yar tahay 65 sano oo waxaad la nooshahay naafo.
✓ Waxaad tahay da 'kasta oo qaba Cudurka Kelyaha-dhamaadka (kilyaha joogtada ah ee u baahan sifaynta ama tallaal, mararka qaarkood loo yaqaan ESRD).
U Qalmida Medicare
Diyaar ma u tahay in laga qoro Medicare Advantage, labada-xaq u leh Medicare iyo Medicaid (Apple Health), ama qorshaha BHSO? U wac si aad u bilowdo.
Isqor maanta ➜
Jawaabo shaqsiyeed u hel su'aalahaaga. Ma ahan 65 weli Waxaan kaa caawin karnaa qorsheynta nolosha ee Medicare.
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Julaay 7, 2020